रेरीद्वारा भेरी अस्पताललाई स्वास्थ्य सामाग्री हस्तान्त्रण – Sadarline
दाङका खोलाहरुमा बाढी आउँदा यातायात प्रभावित
मेलामा जाने एक भारतीयसहित दुईको मृत्यु
निगम कर्मचारी संघमा ईश्वर खड्का
कोरोनाबाट बाँकेमा ५ जनाको मृत्यु
मुशलधारे पानीमा रुझ्दै लूट-२ का सुशिलराज
राप्तीसोनारीको सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न
बाँके र बर्दियाबाट ‘सेटिङ्ग’मा गोरु तस्करी हुँदै
सदरलाइन संवाददाता ८ असार २०७८, मंगलवार १५:२५
नेपालगञ्ज : कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि सहयोगी स्वास्थ्य सामाग्री भेरी अस्पताललाई उपलब्ध गराईएको छ । रेरी बाँकेले नेपालगञ्ज जेसिस, नेपालगञ्ज जुनियर जेसिस, बासलगायत संगको पहलमा सो स्वास्थ्य सामाग्री उपलब्ध गराईएको हो ।
रेरीका अध्यक्ष पुनित विक्रम शाह तथा नेपालगञ्ज जेसिसका रेशम चापागाईले भेरी अस्पतालका अध्यक्ष प्रमोद धिताललाई सो सामाग्री हस्तान्त्रण गरेका हुन । हस्तान्त्रण गरिएका सामाग्रीहरुमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर १० लिटर प्रति मिनेट क्षमताका ३ थान, पल्स अक्सिमिटर १५ थान र १ सय २० थान पिपिई रहेका छन् ।
कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि प्राप्त सामाग्री अत्यन्तै उपयोगी हुने भेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्ट डा. प्रकाशबहादुर थापाले जानकारी दिए । सो अवसरमा नेपाल जेसिसका पूर्व अध्यक्ष तथा सिनेटर रबिन्द्र कर्ण गैसस महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नमस्कार शाहलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
८ असार २०७८, मंगलवार १५:२५
नेपालगञ्ज : कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भइरहेको निषेधाज्ञामा पीडित उद्योगी व्यवसायीका लागि राहतको माग गर्दै नेपालगञ्जमा मङ्गलवार प्रदर्शन गरिएको छ । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा मङ्गलवार साङ्केतिक दबाबमूलक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रदर्शन गरिएको हो । निषेधाज्ञा चलिरहेको अवस्थामा सरकारले कर दाखिला गर्न दिएको असार २५ को म्याद […]
७ आश्विन २०७७, बुधबार १३:१९
१५ श्रावण २०७६, बुधबार ०९:१०
आज साउन १५ अर्थात खिर खाने दिन !
२० चैत्र २०७४, मंगलवार २०:२३
लागूऔषध दुव्र्यसनविरुद्ध सामूहिक हातेमालोको आवश्यक्तामा जोड
८ चैत्र २०७७, आईतवार १४:४८
जमुनाहासहित चौध नाकामा कडाई
३ आश्विन २०७५, बुधबार १८:०६
खजुरामा यसरी मनाइयो संविधान दिवस (फोटोफिचर)
१२ जेष्ठ २०७७, सोमबार १६:३८
बर्दियामा भेटिए तीन जना कोरोना पोजेटिभ